Olona roa voasambotra, mbola misy hafa karohina: sarona ny gazoala halatra 80 litatra an’ny Jirama | NewsMada
Anisan’ny mamotika ny orinasa Jirama ny halatra gazoala ataon’ny mpiasa ao aminy ihany. Tsy vao izao ny nahenoana toy ity tranga tany Ambanja ity, indrindra any amin’ny toby mandeha amin’ny solika.
Ravan’ny zandary sy ny sampam-pitsikilovana ao amin’ny Jirama, ny alarobia teo, ny tambajotra mpangalatra gazoala tany Ambanja. Tratra tao amina tokantrano miisa telo izany, an’ny mpiasan’ny Jirama ny iray, gazoala mitotaly 80 litatra. Tao amin’ny tranon’ilay mpiasan’ny Jirama no nahitana ny 60 litatra, miampy daba plastika miisa 146, efa tsy nisy na inona na inona intsony. Hita tao amin’ny tokantrano iray faharoa ny daba miisa 12 efa foana ihany koa. Tao amin’ ny tokantrano fahatelo ny daba iray feno gazoala sy daba valo tsy nisy na inona na inona.
Olona roa voasambotra, voarohirohy amin’ity raha­raha ity. Taorian’ny fanadihadiana natao azy ireo no nanononany ny mpiasan’ny Jirama iray hafa ho isan’ny mpiray tsikombakomba amin’izy ireo. Mbola karohina kosa ilay mpiasan’ny Jirama iray nahatrarana ireo gazoala 60 litatra.
Mampihodina ny milina mamokatra ny herinaratra vokarin’ny Jirama ny solika. Maro ny faritra misedra olana, satria tsy ampy ny solika ampiasaina. Anisan’ny mahatonga izany koa ireo mpiasa “mpamosavy malemy”, manararaotra mangalatra, toy ity tany Ambanja ity.